September 5, 2010 by chowutyee အီကြာကွေ အစားသွပ်ကြော် ဒီ အီကြာကွေ အစားသွပ်ကြော်က ၀တ်ရည် ထွင်ထားသည့် ဟင်းသစ် တစ်မျိုးပါ။ မနေ့ညနေပိုင်း ညနေစာ အဖြစ် လုပ်စားတာ အိမ်သာ အားလုံး ကြိုက်နှစ်ကြတဲ့ ဟင်းသစ် တစ်မျိုးပါ။ အီကြာကွေ အစားသွပ်ကြော်က ကြွပ်ရွပြီ စားလို့လည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် လုပ်စားကြည့်ဖို့ မမေ့ကြနဲ့နော်…
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, အဓိက ဟင်းလျာများ | 34 Comments	34 Responses
plz try it.. It is really good taste!!🙂
Many thanks to Ma Nandar too!!!🙂
ဟီးဟီး.. .မချော ၀တ်ရည်ဆိုင်ဖွင့်ရင်တော့ အရင်းပြုတ်မှာ သေချာတယ်… ဟင်းချက်ရင် ကောင်းပေ့မှ ချက်ချင်တာနဲ့ အမြတ်ကျန်မှာတောင် မဟုတ်ဘူး… မချောကို ကျေးဇူးပါ..😉
wai ရေ အီကြာလုပ်နည်း ရှာပြီ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်… ဒါမှ ၀တ်ရည် အီကြာကွေ အစားသွပ်ကြော်ကို စမ်းလို့ ရအောင်ပါ..😛
🙂🙂 :)ခုလို အီကြာကွေးလုပ်နည်း ပြောပြတာ ကျေးဇူးပဲနော် မ၀တ်ရည်။ နောက်နေ့ကျရင် အိမ်မှာလုပ်စားဦးမယ်။ မ၀တ်ရည်ကအရမ်းတော်တာပဲ။🙂🙂
ကျေးဇူးပါ brave ရေ…😛
မှုံကြီး ကိုယ်လုပ်စားကြည့် အရမ်းစားလို့ကောင်းတယ်… ဒါနဲ့ ကျော်ထက်လူ မွေးနေ့က ဘာလုပ်စားဖြစ်လဲ…🙂
Thanks Pearl!! Plz try it!!😛
You r so welcome uooswar!!!🙂
Ma Nandar, really ok to call me (wut yee)… heee🙂 Thanks for try my recipe!! yes it is really good taste… Thanks again!!🙂
မမြတ်မွန်… အီကြာကွေးကို ဆီအများကြီးနဲ့ ပြန်မကြော်ပါဘူး… ဆီနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲ ကြွပ်သွားရုံပြန်ကြော်တာမို့ မအီပါဘူး. လုပ်စားကြည့်ပါအုန်း…🙂
🙂🙂 :)ခုလို အီကြာကွေးလုပ်နည်း ပြောပြတာ ကျေးဇူးပဲနော် မ၀တ်ရည်။ နောက်နေ့ကျရင် အိမ်မှာလုပ်စားဦးမယ်။ မ၀တ်ရည်ကအရမ်းတော်တာပဲ။🙂
wai ကိုလည်း ကျေးဇူးပါ..🙂
hote kae စမ်းကြည့်ပါနော် ကိုမျိုးကြီး…😀
i like to cook , so i’ll try all the curry !!! thanksalot,